Wararka - Isbedelka horumarka marawaxadaha Dabaysha Gegeratoy
Dhowr maalmood ka hor, dalad uu hogaaminayo shirkadda weyn ee warshadaha ee Japan Hitachi ayaa ku guuleysatay lahaanshaha iyo xuquuqda howlaha xarumaha gudbinta korantada ee mashruuca 1.2GW Hornsea One, oo ah wershedda ugu weyn adduunka ee dabaysha ka baxda oo hadda shaqeysa.
Dalladda, oo loo yaqaan 'Diamond Transmission Partners', ayaa ku guuleysatay qandaraas ay qabatay Ofgem, oo ah jaangooyaha awoodda dabaysha ee xeebta Ingiriiska, waxayna ka iibsatay lahaanshaha qalabka gudbinta shirkadda sameeysa ee Wosch Energy, oo ay ku jiraan 3 saldhigyo kor u qaada badda iyo warshaddii ugu horreysay ee tamarta ka shaqeysa badda. Xarunta magdhowga, waxayna heshay xuquuqda ay ku shaqeyneyso 25 sano.
Beeraha dabaysha ee Hornsea One waxay ku yaalliin biyaha Yorkshire, England, oo leh 50% saamiyada Wosch iyo Global Infrastructure Partners. Wadar dhan 174 Siemens Gamesa 7MW marawaxadaha dabaysha ayaa la rakibay.
Bixinta iyo wareejinta qalabka gudbinta waa nidaam u gaar ah awoodda dabaysha badda ee Boqortooyada Midowday ee Boqortooyada Midowday. Guud ahaan, horumariyaha ayaa dhisaya qalabka gudbinta. Ka dib markii mashruuca la hawlgaliyo, hay'adda sharciyeynta ee Ofgem ayaa mas'uul ka ah dejinta iyo wareejinta lahaanshaha iyo xuquuqda hawlgallada. Ofgem waxay si buuxda gacanta ugu haysaa nidaamka oo dhan waxayna hubin doontaa in wareejiyaha uu haysto dakhli macquul ah
Faa'iidooyinka tusaalahan loogu talagalay horumariyeyaashu waa:
Ku habboon in la xakameeyo horumarka guud ee mashruuca;
Inta lagu guda jiro howsha wareejinta xarumaha OFTO, looma baahna in lacag lagu bixiyo xarumaha gudbinta ee badda si loo maro shabakadda;
In kor loo qaado awoodda gorgortanka guud ee qandaraasyada mashruuca;
Laakiin sidoo kale waxaa jira faa'iido daro qaarkood:
Soo-saaraha ayaa qaadaya dhammaan hormarinta, dhismaha iyo kharashyada maaliyadeed ee xarumaha OFTO;
Qiimaha wareejinta ee xarumaha OFTO waxaa ugu dambeyntii dib u eegay Ofgem, sidaa darteed waxaa jirta khatar ah in kharashyada qaar (sida ajuurada maaraynta mashruuca, iwm.) Aan la aqbali doonin lana aqoonsan doonin